Indawo yokuhlala yaseTagaytay ethengekayo - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseTagaytay ethengekayo
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Mira
U-Mira Ungumbungazi ovelele
Iyunithi ye-Tagaytay Studio ene-balcony etholakala eduze ne-Tagaytay Rotonda. Eduze nezindawo zokudlela, inxanxathela yezitolo, ukudla okusheshayo, izitolo ezinkulu kanye nezinto zokuhamba zomphakathi. Ifakwe umbhede owusayizi ophindwe kabili, umbhede ongusofa ongu-1, itafula lokudlela nesihlalo, izinto zokupheka, iref, imicrowave, i-airconditioned unit ephelele, i-smart tv ne-wifi. Ilungele isivakashi esifisa ukuphumula ngenkathi sijabulela indawo yase-Tagaytay
Qaphela: Abantu abagonywe ngokugcwele kuphela abazovunyelwa
* * Zonke izivakashi kufanele ziveze ikhadi lokugunyazwa ndawonye ne-ID evumelekile ekhishwe uhulumeni
* * * * Imigqomo engu-18yrs endala kuya ku-59yrs ubudala kuphela * *
Iyunithi yethu inezinto zasekhishini eziyisisekelo ezifana nefriji, i-induction cooker, iketela elinezinhlobonhlobo, ibhodwe lokupheka kanye nepani lokuthosa kanye nezitsha zetafula ezifana namapuleti, izinkomishi, izitsha nokunye.
Amashidi ombhede ahlanzekile, iphepha lethishu, i-shampoo, i-conditioner, ukugeza umzimba, insipho yezandla ewuketshezi kanye noketshezi lokugeza izitsha kuyatholakala. Ingubo yokulala ehlanganyelwayo izonikezwa abantu abangu-2 kuphela.
Hlukanisa igumbi lokugezela nge-heater yamanzi nendlu yangasese nge-bidet.
Ukufinyelela mahhala ku- roofdeck ngomzila wokugijima kanye nokubukwa kwe-360 degrees ye-Tagaytay. Uphahla luvuliwe kusuka ngo-6 ekuseni kuya ku-10 ekuseni futhi ngo-4 ntambama kuya ku-8 ntambama kuphela.
Indawo yokubhukuda iseduze ngenxa ye-Covid 19.
Kunenqwaba yendawo yokupaka ekhokhelwayo etholakalayo ngaphakathi kwesakhiwo ngemali ehambisanayo engu-P50 ngosuku ngoMsombuluko kuya kuLwesine no-P50 ngokungena ngakunye phakathi noLwesihlanu kuya kuSonto namaHolide. Kukhokhelwa lapho kungenwa. Izindawo zokupaka ngaphakathi kwesakhiwo ziyatholakala ngokokuqala ngqa.
Ukupheka kakhulu nokuthosa ukudla okunuka kamnandi njengenhlanzi, i-squid, inhlanzi esomisiwe, i-bagoong nokunye akuvunyelwe
Abaphula umthetho bazokhokhiswa ama-pesos angu-1,000.
Izindleko ezengeziwe zamashidi engeziwe, izingubo zokulala namathawula.
Azikho izilwane ezifuywayo ezivunyelwe ngaphakathi kweyunithi.
Azikho izivakashi. Izivakashi ezibhalisiwe kuphela ezivunyelwe kule yunithi.
Sicela ungaphumi ku-akhawunti ye-netflix. Ngeke sikunikeze imininingwane yokungena ngemvume ku-akhawunti.
Qaphela: Isikhathi sokungena nesokuphuma esishintshashintsha nezimo asivunyelwe. Sicela uqaphele isikhathi esivamile sokungena nesikhathi esivamile sokuphuma seyunithi. Inkokhelo eyengeziwe iyadingeka kuzo zonke izicelo ngaphambi kwesikhathi sokungena esivamile futhi zonke izicelo zangaphambi kwesikhathi sokuphuma esivamile seyunithi futhi kuncike ekutholakaleni.
QAPHELA: Isicelo sokushintsha noma sokushintsha usuku sizovunyelwa kanye kuphela futhi kufanele senziwe iviki elilodwa ngaphambi kosuku lokubhukha kuncike ekutholakaleni, uma kungenjalo asikwazi ukwamukela isicelo sakho sokushintsha.
Ukuhlola kuzokwenziwa ngaphambi kokuphuma, noma yikuphi ukulahlekelwa noma umonakalo uzokhokhiswa ngokufanele. Ukulahlekelwa yikhadi lesikhiye nakho kungakhokhiswa ngokufanele.
4.82 · 102 okushiwo abanye
UMira Ungumbungazi ovelele